हलमा चार फिल्म, दर्शकको साथ कसलाई ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentहलमा चार फिल्म, दर्शकको साथ कसलाई ?
November 10, 2017 Keshab Khadka Entertainment, Kollywood 0
काठमाडौं : आज शुक्रबार देखि चार नेपाली फिल्मले आफ्नो प्रदर्शन आरम्भ गरेका छन्। फिल्म मेला, रोमियो, तान्द्रो र सकस आज रिलिज फिल्महरु हुन्। दुई वटा देखि तिन सम्म फिल्म जुद्नु नेपाली फिल्म नगरीमा सामान्य मानिन्छ तर आज चार फिल्मले आफ्नो प्रदर्शन आरम्भ गर्दा चारवटै फिल्मलाई व्यापारिक रुपमा घाटा हुने पक्का छ।
बसन्त निरौलाको निर्देशनमा तयार भएको फिल्म हो मेला। ‘राज राधिका इन्टरटेन्मेन्ट’को ब्यानरमा तयार भएको फिल्म ‘मेला’मा सलोन बस्नेत, आमेष भण्डारी, अशिष्मा नकर्मी, बसन्त भट्ट, निरज श्रेष्ठ लगायतको अभिनय छ।
फिल्मका प्रस्तुतकर्ता हरि पन्त हुन् भने फिल्ममा हरिकै लेखन रहेको छ। फिल्ममा मनोज के मरोडियाको लगानी रहेको छ। लभ स्टोरी जनरमा निर्माण भएको फिल्म ‘मेला’ नेपालसँगै भारतमा पनि प्रदर्शन हुँदैछ।
त्रिकोणात्मक लभ स्टोरी रहेको फिल्म ‘रोमियो’मा हसनराजा खान, मेलिना मानन्धर, नीशा अधिकारी, ओसिमा बनु, विष्णु प्रतापको मुख्य भूमिका रहेको छ । हसनराजा खानकै निर्माण रहेको फिल्म ‘रोमियो’लाई शंकर कार्कीले निर्देशन गरेका छन् ।
‘ल्याङ ल्याङ’ बोलको गीतका कारण चर्चामा रहेको ‘रोमियो’ ‘एचआरके प्रोडक्शन’को व्यानरमा तयार भएको छ। फिल्मका सह–निर्माता बिष्णु कार्की हुन् भने कार्यकारी निर्माता मिलन सापकोटा हुन् ।
दयाहाङ राई मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘तान्द्रो’लाई साम्तेन भुटियाले निर्देशन गरेका छन्। ब्ल्याक हर्स पिक्चर्स र सिनेमा आर्टको संयुक्त ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा दयाहाङसंगै रामबाबु गुरुङ, बुद्धि तमाङ, कमलमणि नेपाल, राजन खतिवडा लगायतको अभिनय रहेको छ।
‘तान्द्रो’ले तात्कालिन माओवादी युद्धकालमा घटेका घटनालाई पर्दामा देखाउन खोजेको छ। माओवादी द्धन्द्ध कालमा घाईते भएका कोशिस कमरेडको कथामा आधारित रहेर निर्माण भएको फिल्ममा कोशिसको भुमिकामा दयाहाङ प्रस्तुत छन्।
दोभान फिल्मस् प्रा.लि.को ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म ‘सकस’लाई सुन्दर श्रेष्ठ, हेमराज बस्नेत र खगेन्द्र डागीले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् ।राजधानीमा फस्टाउँदै गएको गुण्डागर्दीको कथावस्तुमा आधारित यो फिल्ममा विल्सन विक्रम राई, सुन्दर श्रेष्ठ, महिमा सिलवाल, सुष्मा कार्की, रविन्द्र खड्का, श्याम राई लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ।
November 8, 2017 Keshab Khadka Entertainment, Kollywood, News 0
२२ कात्तिक २०७४,काठमान्डौ । कात्तिक २४ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘रोमयो’को सेन्सर सकिएको छ । मंगलबार गरिएको सेन्सरबाट चलचित्रले युनिभर्सल सर्टिफिकेट पाएको छ । मतलब ‘रोमियो’लाई सम्पुर्ण वर्गका दर्शकले हेर्न पाउने भएका छन् । एचआरके […]